अहिलेसम्मको खोपले ओमिक्रोन भेरियन्ट विरुद्ध काम नगर्ने ! - ramechhapkhabar.com
अहिलेसम्मको खोपले ओमिक्रोन भेरियन्ट विरुद्ध काम नगर्ने !
कोभिडसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा वरिष्ठ भाइरोलोजिस्ट डा. रमेशकुमार आचार्य बताएका छन्, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म बनाइएका भ्याक्सिनले ओमिक्रोन भेरियन्टलाई काम नगर्ने देखिएको छ । जुन निकै नै चिन्ताको विषय हो, त्यसैले विशेष सतर्कता अपनाउनु नै सर्वोत्तम उपाय हो ।
२२ पुसयता कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । २३ पुसमा १४ हजार ९ सय ७१ जनाको नमुना परीक्षण गर्दा एकैदिन ९ सय ३८ जना संक्रमित थपिएको थियो । २४ पुसमा ९ सय ४४ जना संक्रमित थपिए । साथै २५ पुसमा १२ हजार ६ सय ३२ जनाको नमुना परीक्षण गर्दा १ हजार १ सय ६७ जनामा कोरोना संक्रमण ९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।
२६ पुसमा ११ हजार ४ सय २९ जनाको परीक्षण गर्दा १ हजार ४ सय ४६ जना संक्रमित थपिए । २७ पुससम्म आइपुग्दा सो संक्रमण दर बढेर २ हजार ४ सय ४४ पुगेको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।